Best inlay inlay drip Irrigation tape Manufacturer and Factory |DAYU
Takelaka data ID161810RN
Haavo (mm):0.16 0.18 0.2 0.3 0.4 0.6 0.8 1.0mm
Ny halaviran'ny Dripper (mm): 100 150 200 250 300 400 500mm
Fikoriana mitete [0,50] （L/h）：1,38L/h 2L/ora 3L/ora
Mety: ampiasaina amin'ny famafazana amin'ny fambolena, trano fonenana maoderina, hazo fihinam-boa, ary rivotra.
Kasety mitete karazana paty voapetaka
Ny taranaka vaovao amin'ny vokatra fanondrahana mitete dia novolavolaina avy amin'ny fehikibo fanondrahana mitete cylindrical anatiny.Izy io dia vokatra fanondrahana micro ara-toekarena izay mahafeno ny fepetra takian'ny fambolena sy ny fampandrosoana SDI.
Haben'ny rindrina: 0.18 0.2 0.3 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2mm, sns.
Dripper elanelana: 100 150 200 300 400 500mm, sns.
Fikoriana: 0.8L/H 1L/H 1.2L/H 1.38L/H 1.8L/H 2L/H 2.4L/H 3L/H 3.2L/H
Fitakiana filtration: filtration 120 mesh 120 mesh
Fampiharana: mety ho an'ny fambolena fambolena, trano fonenana maoderina, hazo fihinam-boa ary ala vaky rivotra
Famerenana ambony amin'ny fampiasam-bola: Ny fifandanjana tsara indrindra amin'ny fahombiazan'ny fanondrahana rano sy ny teti-bola, tsy manahy momba ny fahamarinan'ny vokatra sy ny fitovian'ny fitomboan'ny vokatra.
Fikoriana fanamiana: Ny fatran'ny fanerena fanerena dia manome ny habetsahan'ny rano sy ny sakafo ho an'ny zavamaniry tsirairay amin'ny fitaterana fantsona lavitr'ezaka sy ny tany avo sy ambany miondrika.
Ny fanoherana tsara amin'ny fanakanana: Ny mekanika manadio tena tsy tapaka dia manala ny potipoti-javatra ary tsy manakana mandritra ny tsingerin'ny fiainan'ny voly.
Lava ny fametrahana fantsona sampana, ary mihena ny vidiny: mampiasa fantsona lehibe kokoa, afaka manondraka fantsona sampana hatramin'ny 500 metatra ny halavany, mampihena ny vidin'ny fametrahana.
Fambolena Fambolena fandoroana fantsona / kasety rafitra ho an'ny fambolena fanondrahana amin'ny kalitao avo sy ny vidiny mifaninana
Endri-javatra ny fantson-drano mitete:
1. Ny dripper boribory dia novokarina voalohany tamin'ny lasitra avo lenta, avy eo miraikitra amin'ny hose PE.
2. Ny dripper izay welded mivantana ao anatin'ny sodina dia misy fatiantoka kely ary
3. Ny fananana anti-block tsara, ny fantsona malefaka ary ny fizarana rano aza.
4. Misy karazany roa ny drippers: fanerena-compensation sy nonpressure-
fanonerana, mety amin'ny terrain samihafa.
5. Ny savaivony samihafa, ny hatevin'ny rindrina ary ny elanelan'ny dripper dia azo vokarina.
6. Ny endri-javatra manan-danja indrindra dia azo ampiasaina mandritra ny 5-8 taona.
Maharitra izy io ary be mpampiasa amin'ny fanondrahana an-tsaha.
teo aloha: OEM Famatsiana Rafitra fanondrahana rano mitete - Fambolena fanondrahana PVC malefaka Layflat Water Hose - DAYU
Manaraka: Rafitra fanaraha-maso mandeha ho azy tanteraka